मन्त्री भट्टराईमाथि विमानस्थलमै जाईलाग्यो ज्ञानेन्द्र शाहीको टोली
अपमानपूर्ण ढंगले प्रस्तुत भए शाही (भिडियोसहित)
काठमाडौं । नेपालगञ्जबाट काठमाडौं फर्किने क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईमाथि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा विमानभित्रै केही युवाहरुले गालीगलौज गरेका छन् ।
पर्यटन मन्त्री भट्टराई शनिबार कैलालीको टिकापुरमा डल्फिन महोत्सवको उदघाटन सकेर शनिबार साँझ नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट बुद्ध एयरमा काठमाडौं फर्किँदै थिए । कार्यक्रम सकेर नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आइपुग्दा प्लेन छुट्ने समय केही ढीलो भएको थियो ।
तर, शाहीको टोलीले मन्त्री भएर जनतालाई दुःख दिने ? ‘तपाईले हाम्रो प्लेन किन रोकेको ? एक घण्टासम्म प्लेन रोक्ने ? तपाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? मोजमस्तीमा हुनुहुन्थ्यो कि केमा हुनुहुन्थ्यो ? ख्याल राख्नुपर्दैन टाइमको ?’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै भट्टराईलाई गालीगलौज गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै शाहीले सामाजिक सञ्जालमा ‘मन्त्री योगेश भटराईलाई आज नेपालगञ्ज एअरपोर्टमा रामधुलाई गरियो । मन्त्री योगेश भट्टराईले आज नेपालगञ्ज एअरपोर्टमा १ घन्टा प्लेन कुराएपछि हामी नागरिकले रामधुलाई गरियो । विचरा मन्त्रीज्यु मुसो लुकेजसरी लुक्नु भो । अब नागरिक सचेत भैसके । अरिङगालका दिनगन्ती सुरु’ स्टाटस पोष्ट गरेका छन् ।
तर, मन्त्री भट्टराईले आइतबार संसदमा जवाफ दिँदै पर्ने भएको र कार्यक्रम सकिँदा ढिलो भएकाले १५ मिनेट मात्रै ढिलो भएको उल्लेख गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत नै मन्त्री भट्टराईले आफ्नो कारण प्लेन केही ढिला उढ्न गएकोमा क्षमा पनि मागेका छन् । ‘मेरा कारणले यात्रुहरुमा पर्न गएको असुविधाप्रति भने क्षमाप्रार्थी छु’ उनले भनेका छन् ।
सबै यात्रुको बोर्डिङ भएको करिब १५ मिनेटमा हाम्रो टिमको बोर्डिङ भएको हो । भोलि प्रतिनिधिसभामा माननीयहरुको प्रश्नको मैले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेका कारण काठमाडौं फर्कनैपर्ने दबावमा म थिएँ । नेपालगञ्ज विमानस्थलमा ३र४ जना व्यक्तिहरु आक्रामक शैलीमा मेराविरुद्ध प्रस्तुत हुनुभयो । एकजनाले पारसका विरुद्ध सात लाख हस्ताक्षर दरबारमा बुझाएर तैंले हामीलाई कति दुःख दिएको छस् ? त्यो हामीले कहाँ बिर्सेंका छौ र ? सम्म भने । त्यो सुनेपछि उनीहरुको नियत मैले बुझिहालें । सम्पूर्ण यात्रु तथा बुद्ध एयरले देखाएको समझदारीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’